Gabal yar oo waxba
Soo baxa duufaanka
madow kaamil ah
waayeelladii ka 50 Songs
La kulanka boqorka habeenada Florentine
markaan ka hadlayno muusikada oo aan ku noolaanno ubaxyada iyo buuqa badan ee fiidnimadii adduunka, qofku ma caawin karo laakiin wuxuu sheegi karaa mid ka mid ah magacyada halyeeyada ah ee deegaankan.
Fabrizio Rioli waa jilaa wax ka badan kuwa kale ku guuleystey inuu siiyo daqiiqado xusuus leh oo ku saabsan discos iyo naadiyo waaweyn oo muusigga lagu soo saaro oo lagu qaso 120 bpm kor.
Laakiin waa kuma Rioli D.J. ?
Waa maxay taariikhdeeda iyo halkee ayey ka timid?
si aan uga jawaabno su'aalahan ma jirto hab ka wanaagsan oo toos loo weyddiisto oo tan aan ku sameynno waxaan raadineynaa isaga oo xadaya macluumaadka ku keydsan goobta Muusikada Rioli Planet, hay'adda maamusha fiidkii fanaanka iyo munaasabadaha iyadoo la kala saarayo codsiyada ka yimaada adduunka badhkiis.
muusikada Rioli Planet ee aan ku kulannay Tarker Homan, impresario oo isku magacaaba gacanta bidix ee Rioli D.J., midka toos ula macaamila Warner, la Rumayso, Sony Records iyo kuwa kale oo badan.
Rioli D.J. in kasta oo qalabkan weyn ee ka dambeeya haddana had iyo jeer wuxuu maareeyaa inuu ahaado farshaxan fudud oo edeb leh, saaxiib dhamaantiis marwalbana diyaar u ah inuu kaqaybqaato si uu ugu bixiyo cawaysihiisa cajiibka ah qofkasta oo iyaga codsada oo leh shuruuda lama huraanka ah ee naxariista iyo daacadnimada. Tarker wuxuu qaadayaa mas'uuliyad buuxda xulashooyinka waajibaadka saaran “xun”, sida diidmada dhacdo ama goob aan waafaqsanayn niyadda iyo himilada Rioli D.J.
Markaa hal fiidnimo ayaan ku guuleysannay inaan u raacno DJOON, caweyska caanka ah ee Paris. Djoon macno ahaan waxaa loola jeedaa “anima” oo meeshani waxay leedahay naf badan. Waxay ku taal meel wax yar u jirta Seine, degmada 13-aad, Djoon waa mid ka mid ah kooxihii ugu dambeeyay ee ka dhasha naadiyada ka soo ifbaxay aaggan, oo caan ku ah goobaha lagu shiro ee avant-garde. Aad bay u jeclaayeen taageerayaasha muusikada Afro-house, Naadigan casriga ah ee qaab dhismeedka casriga ah ee dhiirrigeliyay moodooyinka New York ayaa si dhakhso leh u helay caan ka dib mahadnaqdiisa habeennada lama ilaawaanka ah ee muusikada nafta, funk, guri qoto dheer, garaashka iyo diskiga. Waxay martigalisay walina marti galineysaa xidigo caalami ah sida Chez Damier, Louie Vega, Lil ‘Louis, Kerri Chandler e Kafee Madoow. Goobtu waa mid aad u waasac ah oo leh muraayad qurux badan iyo bir bir ah.
Sidaas awgeed waxaan ku guuleysannay inaan helno Rioli D.J. kaasoo dhammeeyey cabbitaankiisa cabitaan ka hor bilowgii fiidkii qoob-ka-ciyaarka, fadhiya kursiga keydka dhexe. Fursad tijaabin!!
Anaga: “iga raali noqo, tani waa halyeeyga Rioli D.J. ?”
Rioli: “hubaal, Waa aniga. Laakiin maxaad iigula hadlaysaa Faransiis hadaad tahay qofka waalan ee andriusmusic.com?”
Qosolku isla markiiba wuu yareeyaa masaafada, Fabrizio isla markiiba wuu na baaray waxaanan sii wadi karnaa inaan ku hadalno af Talyaani.
Anaga: “Waxaan kaa codsan karnaa inaad si kooban noogu sheegto sheekadaada? Tusaale ahaan, waa run inaad halkan ku nooleyd magaalada Paris sanado badan?”
Rioli: “maya, maya… io preferisco Scandicci, Viottolone iyo meelaha ku xeeran”.
Anaga: “muusikadaadu waxay si uun ugu xiran tahay xilliyo taariikhi ah oo gaar ah?”
Rioli: “Waxaan badanaa tixraacaa neocytationism-ka Austrian”.
Anaga: “Ayaa saameyn badan ku yeeshay xiisahaaga? Sidee ku dhacday inaad noqotay Rioli D.J. ?”
Rioli: “Xaqiiqdii eedaday, haa eedaday waxay jeceshahay inay dhigto diiwaanka Villa iyo Modugno, halkan, Waxaan u maleynayaa inaan aad u saameeyay iyada.”
Anaga: “Maxay run ka tahay xaqiiqda ah in Calvin Harris uu kula soo xiriiray wadashaqeyn?”
Rioli: “Ma aqaan, Uma maleynayo inaan aqaan isaga… è un emergente?”
Anaga: “E’ Waa run in mustaqbalka sii deynta hees aad soosaartay aad qorsheyneyso iyo Andrew Firenze?”
Rioli: “Suurtagal baa jirtay laakiin qof baa i fahmay inay fiicnaan lahayd in laga fogaado, waxaa jira dano waaweyn oo dhaqaale iyo siyaasadeed”.
Anaga: “Xirfadaada xirfadeed waxaad inta badan aqbashay inaad kaqeyb gasho naadiyo aad caan u ah oo aad caan u ah, sideed u sharixi kartaa doorashadan yaabka leh?”
Rioli: “Marnaba ma dareemin laakiin waad ku mahadsan tahay inaad i ogeysiiso, maxaa yeelay kuwa ugu caansan ayaa ka fog gurigayga ..”
Anaga: “maxaa talo ah oo aad dareentaa inaad siin karto dhalinyarada doonaya inay bilaabaan xirfadan farshaxanimo?”
Rioli: “Iska daa iskuna day inaad wax kale sameyso, tusaale goosashada yaanyada, macquul ahaan San Marzano oo aan filayo inay yihiin kuwa ugu fiican.”
Waqtigan xaadirka ah waxaa na dhexgalay laba ilaalo oo waaweyn oo leh muraayadaha madow iyo sameecadaha dhagaha oo naga baryaya inaan iska tagno oo aan u oggolaanno Rioli D.J. si xor ah u heli kartaa qunsulka.
E’ waxay ahayd waayo-aragnimo weyn, ma aanan rajeyneynin inaan awoodno inaan isaga u dhawaano oo taa badalkeeda, sameeyey.
Hadda waxaan sidoo kale hoos u dhignay makarafoonkeenna iyo buugaagta wax lagu qoro, show ayaa bilaabmi doona.
Raac Rioli DJ Facebook
Andrius è un musicista fiorentino che produce musica diuretica, oo sanqadhiisana ku salaysan yahay isku dhafka ah ee psychedelia, music elektaroonik ah oo luuq inta badan gluten. wax soo saarka ayaa la tilmaamay for songs soundtracks iyo dhibaatooyin dheefshiidka.